ဆန္ဒနှင့်ဘ၀ ထပ်တူမကျခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆန္ဒနှင့်ဘ၀ ထပ်တူမကျခြင်း
Posted by Ko chogyi on Jul 21, 2013 in Creative Writing | 17 comments
ရင်ထဲမှာ အပြင်းပြဆုံးဆန္ဒ၊ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ စောင့်စားနေခဲ့ရပြီး၊ ၆ လ ကြာအောင်စောင့်နေရတဲ့၊ တစ်နှစ်မှာ နှစ်ကြိမ်သာဆုံခွင့်ရတဲ့ ဂဇက်ရွာ စာပေချစ်သူများ ဆုံစည်းပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲကို တက်ရောက်ဆင်နွှဲမယ်လို့ အားခဲထားခဲ့တာပါ။ ဒီရောဂါစတင်ခဲ့တာကလည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက် ပထမအကြိမ် မန္တလေးဂဇက် အဖွဲ့ဝင်များ ဆုံစည်းပွဲမှာ နောက်တစ်ကြိမ်ကို နောက် ၆ လအကြာ မှာပြုလုပ်ပြီး ထပ်မံတွေ့ဆုံကြမယ်လို့ ပြောကြား ခဲ့ပြီး ကတည်းကပါ။
အစ်မပဒုမ္မာက Facebook မှာရော ရွာထဲမှာပါ ဖိတ်စာဝေနေပြီဆိုပြီး တင်လာချိန်မှာ ရွာသူားတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆုံတွေ့ကြရတော့မယ် ဆိုပြီး ၀မ်းမြောက်ခဲ့မိပါတယ်။ သားငယ်လေးက သူလည်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ ကိုချိုကြီး+၁ ဆိုပြီး စာရင်းတင်ခဲ့တာပေါ့။
ကိုကြီးပေါက်က သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပို့လိုက်မယ်၊ ဝေပေးပါဆိုတော့လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပေါ.။ ဆယ်အိမ်ခေါင်းမိတိုက်ကို ညီလေး ဘာလိုသေးလဲ၊ ဘာကူညီရမလဲဆိုတော့ ရပါတယ်။ wireless mic အဆင်ပြေရင်တော့ယူခဲ့ပေးပါတဲ့။ ရတာပေါ့ကိုယ်ယူခဲ့မယ်လို့။
စနေနေ့ည ၉ နာရီလောက်မှာ မလေးရှားမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲဖြစ်သူ ကိုစိုင်းက ဖုန်းဆက်လာတယ်။ “ ငါမနက်ဖြန် ၈ နာရီလောက် ရန်ကုန်လေဆိပ်ရောက်မယ် လာကြို ပေးပါလား” “ ကျွန်တော်မနက်ဖြန် မအားဘူး၊ ကိုခိုင်ကို လာကြိုခိုင်းလိုက်မယ်” ဆိုပြီး ပြန်ဖြေ လိုက်တာပေါ့။ မနက်ဖြန် တနင်္ဂနွေနေ့ တွေ့ဆုံပွဲသွားမှာလေ။ အဲ့ဒါနဲ့ အစ်ကိုခိုင်ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး ကြိုဖို့ပြောလိုက်တော့။ “ ငါမင်းဆီကို ဖုန်းဆက် ခိုင်းထားတယ်လေ ဖုန်းမရဘူးလား၊ ကိုစိုင်းအမေ(ကျွန်တော်အဒေါ်) ကျန်းမာရေးအခြေအနေက သိပ်မကောင်းဘူးကွ၊ ဒါကြောင့် အလှူကို မနက်ဖြန် တနင်္ဂနွေနေ့ ပြောင်းထားတယ်လေ ကြိုဖို့တော့စီစဉ်လိုက်မယ်”တဲ့။
သွားပါပြီ အားလုံးရေစုန်မျောကုန်ပြီ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်နဲ့ တွေဆုံပွဲရက်ထပ်သွားပြီ၊ အချိန်ကလည်းတိုက်နေတယ်။ မိသားစုအားလုံးစုပြီးလုပ်တဲ့ ပွဲဖြစ်လို့ မတက်လို့ကလည်းမဖြစ်။ မဒမ်ချိုကြီးကတော့ပြောပါတယ် သူတို့ကိုအရင် အလှူလုပ်မယ့် အစ်မအိမ်(အဲဒီအိမ်မှာ ကျွန်တော့်အမေရော၊ အဒေါ်ပါ နေကြတာပါ) ပို့ခဲ့ပြီး တွေ့ဆုံပွဲသွားလိုက်ပါလားတဲ့။ အဲဒီလိုဆိုပြန်တော့လည်း ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုးတွေက ပြောစရာဖြစ်နေပြန်ရော။ ဒါနဲ့ မနက်စောစော ကန်တော်ကြီးသွားမယ်၊ ပေးစရာရှိတာတွေပေးပြီး အလှူသွားမယ် တရားနာရေစက်ချပြီးတာနဲ့ ထမင်းမစားတော့ပဲ တွေ့ဆုံပွဲကို ပြန်ပြေးလာမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။
မနက်အိမ်ကနေ ၇ နာရီထွက်ပါတယ်။ ကန်တော်ကြီးကို ၇ နာရီ ၃၀ လောက်ရောက်တော့ ဆယ်အိမ်ဂေါင်းရယ်၊ ကိုကြီးမိုက်ရယ် နောက်ထပ် ၂ ယောက် ၃ ယောက်လောက်တွေ့တယ်။ လောလောနဲ့ မိတ်မဆက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ (ပြန်လာဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိလို့ပါ) မိတိုက်ကို ကိုပေါက်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ရယ် Wireless Mic ပေးပြီး၊ ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ယုဇနဥယျဉ်အိမ်ယာ(စစ်တောင်းရိပ်မွန်)ကို ၈ နာရီခွဲလောက်ရောက်ပြီး အလှူအတွက် ၀ိုင်းကူ လိုက် အမေနဲ့စကားပြောလိုက်လုပ်နေခဲ့တယ်။ အဒေါ်အခန်းကိုဝင်မကြည့်လိုက်မိဘူး။ ၉ နာရီ ၄၀ လောက်မှာ လေဆိပ်ကနေ ကိုစိုင်းရောက်လာတော့ သူနဲ့အတူ ၀င်လိုက်သွားမှ အဒေါ်က အသက်ကိုခဲခဲယဉ်းယဉ်းရှုနေမှန်းတွေ့ရတယ်။ ၁၀ နာရီမှာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကြွလာလို့ တရားနာနေတုန်း ၁၀ နာရီ ၃၀ မှာ မရီးကတိုးတိုးလေးလာပြောတယ်။ အဒေါ်ဆုံးသွားပြီတဲ့။ အသက်ကြီးပြီး ကျန်းမာရေးလည်းသိပ်မကောင်းတဲ့ အမေ ရုတ်တရက်သိမှာစိုး တာနဲ့ တရားနာဆွမ်းကျွေးကို ဟန်မပျက်ဆက်လုပ်ရင်း၊ အစ်ကိုတွေကလည်း တစ်ဖက်က ဈာပနအတွက်ကြိတ်ပြီးစီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ မိသားစု ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ရုံးဌာတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဈာပနကိစ္စကို လိုက်လံဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ညနေ ၄ နာရီမှာ မီးသဂြိုလ်ပြီးခဲ့ ပါတယ်။
မီးသဂြိုလ်ဖို့ ကိစ္စတွေ စီစဉ်နေတုန်းမှာပဲ မန်းကလာတဲ့ သကြားက ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ ဟိတ်လူကြီး ကတိမတည်ဘူး၊ ဘာလို့ပွဲမလာတာလဲ ဆိုပြီးပြသနာရှာပါတော့တယ်။ ဘေးကနေ ခြောက်မျက်နှာက ပြောခိုင်းနေတဲ့အသံလည်း ကြားရပါတယ်။ သူတို့ကို ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ရှင်းပြခဲ့ပါ တယ်။ ညီလေး ဘယ်တော့ပြန်မှာလဲဆိုတော့ ဒီညနေတဲ့။ မဆုံနိုင်တော့တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲကိုလည်း ဘယ်လိုမှ မရောက်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ရွာသူားအားလုံးနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆုံချင်ပေမဲ့ ဆန္ဒနဲ့ဘ၀က ထပ်တူမကျခဲ့ဘူးလေ။
“ ကြုံတုန်းရွာသူားတွေကို ပြောချင်တာလေးတစ်ခုပါ၊ အဒေါ်က ငယ်စဉ်ကနေစပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ခန့်အထိ ကွမ်းစားခဲ့လို့ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ခဲ့ တာပါ။ ကွမ်းစားသူများ သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်အောင် သတိပေးတာပါ။ အဲဒီအကြောင်းကိုလည်း ကျွန်တော်ရေးပြီး တင်ပေးပါမယ်”
* ဒီနေ့ပွဲကို မတက်လိုက်ရတဲ့အတွက် ဒီပွဲမှာ ဆုံတွေ့ကြပြီး ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေကို မနာလိုဖြစ်မိတယ်ဗျာ။
အစ်​ကို့​သောကကိုမြင်​​ယောင်​မိပြီး ကို​ယ်​ချင်းလည်းစာပါတယ်​ …
အဒေါ် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။ ကျန်ရစ်သူတွေ လဲ တရားစိတ်သွင်းပြီး စိတ်အေးချမ်းကြပါစေ လို့ဆုတောင်းပါတယ်။
ကိုစိုင်း က အမေ့အသက်မှီသွားတာနော်။ တော်သေးတာပေါ့။
မနက်ဖြန် ဆိုတာတွေ က မပိုင်ကြောင်း အများကြီးသက်သေရှိခဲ့ပြီ။
ဒီနေ့ ဒီအချိန် ဘဲ ကိုယ်ပိုင်သမို့ ရသမျှအချိန် ကို သတိလေးတွေနဲ့ ဖြတ်နိုင်ဖို့ပါဘဲ။
တွေ့ဆုံပွဲပုံကိုကြည့်ပြီး ကိုချိုကြီးကို မတွေ့မိပါလားလို့ထင်မိတာ….
သတိတရ မေးကြတဲ့ ရွာသူားတွေ အများကြီးထဲ..မှာ.
ကိုဆာမိ၊ အရီး၊ မမ၊ အလင်းဆက်၊ ဦးကြောင် အားလုံးကျေးဇူးပါ။
အမေဆုံးတဲ့.. နှစ်ပါတ်လည်နီးလာတာနဲ့.. စိတ်ထဲ.. အမေ့ သတိရနေမိတာ…
အဲလောက်အထိ နက်နက်နဲနဲ တွေးမကြည့်ဖူးဘူးလေ
တိုက်ပဲ တိုက်ဆိုင်လွန်းတယ်နော်။ စိတ်လည်းမကောင်းဖြစ်မိတယ်။ အလှူရယ်၊ တွေ့ဆုံပွဲရယ်၊ ဈာပနရယ် အကုန်လုံး တစ်ထပ်တည်းကျနေတာဟာ အတော်လည်း အံ့သြမိတယ်။ ဒါကြောင့်ပြောတာထင်တယ် တွေ့ဆုံကြုံကွဲ ဖြစ်မြဲဓမ္မတာဆိုတာပေါ့။ နောက်တစ်ကြိမ် ဆုံမှာပေါ့ရှင်။
အစ်ကို လာပြီး ပြန်သွာတော့ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပေါ့…….
ပွဲပြီးလို. အစ်ကိုဖုန်းလာမှ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်သိရတော့ ပိုလို.စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ…
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အစ်ကို စီစဉ်ထားတဲ့ စာအိတ်လေးတွေနဲ. လေးပေါက်လက်ဆောင်လေး အဆင်ပြေပါတယ်…
သဂျီး၊ သဂျား၊ မနော်၊ ရွှေတိုက်အားလုံးကျေးဇူးပါ။
ဆန္ဒနှင့်ဘ၀ ထပ်တူမကျတာတော့ မောင်ကျောက်လည်းအတူတူပါ…
စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါ ပြန်ချင်တာ ပြန်လို့မရခဲ့ဘူးလေ…
ကိုချို့ အဒေါ်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာ…
တစ်ခါတစ်လေ မထင်ထားတဲ့အရာတွေဟာ ချိန်ကိုက်ပြီး လုပ်နေတာလားလို့တောင် ထင်မှတ်မှား ရလောက်အောင် တိုက်ဆိုင်မှုတွေက ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။ အခု ကိုချိုကြီး အဖြစ်ဘဲ ကြည့်လေ၊ ထိုနေ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်။
သွားလေသူ အဒေါ်လည်း ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ကိုခင်ခနဲ့ ကိုကြီးမိုက်ရေ ကိုကျောက်ပွဲမှာဆုံကြမယ်။
(ရွာ့ဖူးစာကြောင့်ရော၊ ချစ်သူခင်သူပေါများတာကြောင့်ရော၊ အမှန်က ရွာထဲမှာ အတင်းရော ကာရော လိုက်ကြွားထားတာကြောင့်) ကြားဖြတ်တွေ့ဆုံပွဲတောင် ဖြစ်လောက်တယ်။
တွေ့ဆုံပွဲကတော့… နောင်လဲ မကြာမကြာတွေ့ဖြစ်ကြမှာပါ…။
ကွမ်းကိုဆေးထည့်စားရင် (ဘယ်သူကရော ဆေးမပါပဲစားမှာလဲ) ကင်ဆာဖြစ်တတ်တာ သိတဲ့သူ သတိထားမိတဲ့သူ နည်းပါတယ်။
လူဆိုတာကလဲ ကိုယ့်နားနီးမှ ကြောက်တတ်တာကလား…။
အဒေါ်အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး ကိုချိုကြီးရေ …